A Zimbabwe Spring? New leader embraces surprising freedoms | Daily Mail Online
Published: 05:14 EDT, 6 May 2018 | Updated: 05:39 EDT, 6 May 2018
HARARE, Zimbabwe (AP) - Zimbabwe's new president is rolling out freedoms as never seen before in the country recovering from the 37-year grip of former leader Robert Mugabe.
Youths take turns to smoke marijuana in a park in Harare, Friday, May, 4, 2018. The Zimbabwean government has legalised marijuana farming for medicinal and scientific purposes and becomes one of the rare African countries to do so. The country's new President Emmerson Mnangagwa is rolling out new freedoms as never seen before in the country recovering from a 37 year grip of former leader Robert Mugabe.(AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
A portrait of Zimbabwe's new leader, Emmerson Mnangagwa is seen at the ruling party headquarters in Harare, Saturday, May, 5, 2018. The country's new President is rolling out new freedoms as never seen before in the country recovering from a 37 year grip of former leader Robert Mugabe. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
Popular Zimbabwean musician Thomas Mapfumo throws out cds to fans during his performance in Harare, Sunday, April, 29, 2018, after returning from exile in the United States to perform protest songs in front of tens of thousands of people on the outskirts of the capital. The country's new President Emmerson Mnangagwa is rolling out new freedoms as never seen before in the country recovering from a 37 year grip of former leader Robert Mugabe. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
Portraits of Zimbabwe's new leader, Emmerson Mnangagwa are seen on city buildings in Harare, Saturday, May, 5, 2018. The country's new President is rolling out new freedoms as never seen before in the country recovering from a 37 year grip of former leader Robert Mugabe. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
Popular Zimbabwean musician Thomas Mapfumo performs to a large crowd in Harare, Sunday, April, 29, 2018, after returning from exile in the United States to perform protest songs in front of tens of thousands of people on the outskirts of the capital. The country's new President Emmerson Mnangagwa is rolling out new freedoms as never seen before in the country recovering from a 37 year grip of former leader Robert Mugabe.(AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
A man smokes marijuana in a park in Harare, Friday, May, 4, 2018. The Zimbabwean government has legalised marijuana farming for medicinal and scientific purposes and becomes one of the rare African countries to do so. President Emmerson Mnangagwa is rolling out new freedoms as never seen before in the country recovering from a 37 year grip of former leader Robert Mugabe. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
Zimbabweans enjoy a performance by a South African band once banned for a video seen as mocking Mugabe, at a festival in Harare, Friday, May, 4, 2018. The country's new President Emmerson Mnangagwa is rolling out new freedoms as never seen before in the country recovering from a 37 year grip of former leader Robert Mugabe. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)